नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि रूस र युक्रेनबीचको तनाव उत्कर्षमा
भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि रूस र युक्रेनबीचको तनाव उत्कर्षमा
पुटिनले सोमबार नै दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापनाका लागि रूसी सेना पठाउने निर्णय समेत गर्नुभयो । पुटिन त्यतिमै रोकिएनु भएन, देश बाहिर सेना पठाउने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गराउनु भयो ।
पुटिनको पछिल्लो कदमले पश्चिमी राष्ट्रलाई थप रूष्ट बनाएको छ । उहाँको कदमले युक्रेनसँग मात्र होइन अमेरिका, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र युरोपेली युनियन (इयु) सदस्य राष्ट्रसँग टकराव बढाएको छ । फलस्वरूप अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इयुले रूसमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।
‘शक्तिशाली राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्ट्रलाई कसरी दबाब दिन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । रूसले ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भन्या जस्तो गरेको छ,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो ।
भट्टराईको बुझाइमा रूसले अहिले आफै युक्रेनभित्र अशान्ति मच्चाइरहेको छ । अनि गडबड भयो भनेर युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएर रूसले हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ छ । यो विषय एकदमै संवेदनशील छ ।
‘शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रले सानो तथा कमजोर राष्ट्रमा आन्तरिक असन्तुष्टि हुँदा कसरी शोषण गर्छन् भन्ने उदाहरण हो रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनाव । यस विषयमा नेपाल सरकारले वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ,’ सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूको विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहनु भएको भट्टराईले भन्नुभयो ।
‘रूसको पछिल्लो कदमले साना राष्ट्रको भविष्य के हो ? उनीहरूको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता के हो ? भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
‘हामी पनि दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं । लिपुलेकको कुरा पनि हामीले देखेको, भोगेको हो । हाम्रा लागि यो उच्च संवेदनशील विषय हो । हामी सतर्क हुन आवश्यक छ,’ राजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
‘सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा प्रश्न गर्न भएन । रूसले अहिले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन गलत हो । युक्रेनमा रूसीमूलका र भाषी छन् । नेपालमा पनि भारतीय छन्, भोलि चिनियाँ जनसंख्या पनि बढ्ला । हामीले सोच्नु पर्दैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भन्नुभयो ।
सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना बदलिएपछि विभिन्न गतिविधि हुन थालेको उनले बताए । ‘बंगलादेश जन्मियो, सिक्किम भारतमा गाभियो । अब यसलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ र सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात नेपालले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न तत्काल परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता हुन नसक्दा नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको उहाँको बुझाइ छ ।
‘युक्रेनमाथि रूसले दबाब दिँदा नेपालले लामो समय आफ्नो सार्वभौमिकताको ख्याल गरी अडान राख्नुपर्छ । नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्नताको नीति के हो ? परिवर्तित ग्लोबल अर्डरमा नेपालको अडान के हो ? पहिला आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुनुप¥यो र त्यसपछि स्पष्ट नीतिका आधारमा बोल्नुपयो,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
नेपालले आफ्ना सबै नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बस्न्यातको ठम्याइँ छ । शक्तिराष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रमाथि जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिन नहुने तर्क उहाँको छ ।
अहिलेका परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल प्लेटफर्ममा आफ्नो अडान के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा अन्य साना राष्ट्रको पनि हित हुनेगरी राख्नुपर्ने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
‘हिमालय क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण चीन र भारतबीच जुन सैनिकीकरण भइरहेको छ, यसले हामीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने बेलैमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ । यस्तो बेला कुन नीति अपनाउने हो बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसको सामना दुई तरिकाबाट गर्नसकिने बस्न्यातको बुझाइ छ । पहिलो, राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट । दोस्रो, सेनालाई थप सशक्त बनाएर । ‘सेनालाई सशक्त बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ । के हाम्रो सरकार सेनामा लगानी बढाउन सक्छ रु सक्छ भने बढाउन प-यो, सक्दैन भने कस्तो नीति लिने हो बेलैमा सोचविचार गर्नुप-यो,’ बस्न्यातले भन्नुभयो ।
पूर्वराजदूत भट्टराई रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनावलाई ‘आइडोलोजी वार’ भन्न रूचाउनु हुन्छ । शीतयुद्धसँगै अन्त भएको विचारको लडाइँ फेरि सुरू हुन थालेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
‘युक्रुेन सरकारले पश्चिम देशहरूप्रति झुकाव राख्यो भन्दैमा आइडियोलोजीको आधारमा उसको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि फेरि आइडोलोजीको वार सुरू भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।’
विचारकै कारण अहिले चीन र रूसको मित्रता मजबुत बन्दै गएको उहाँले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘चीन र रूस प्रजातान्त्रिक होइनन्, उनीहरू प्रजातन्त्र विरोधी हुन् । युक्रेनमा जे देखिएको छ त्यो राजनीतिक प्रणालीको लडाइँ पनि हो ।’
‘जुनसुकै बेला उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन सुरू गरेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, ‘हालसम्म विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका ३८ जना र युरोप तथा अमेरिका हिंडेका दुई सय जना जति युक्रेनमा रहेको विवरण प्राप्त भएको छ ।’
‘अहिले युक्रेनमा कति नेपाली छन् भन्ने हाम्रो पहिलो चासो हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बाहिर निकाल्ने वा त्यहाँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पहल गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
‘हामीले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ । रूसले अहिले युक्रेनमाथि जे गरिरहेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरूद्ध छ । यसको विरोध गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
नेपाललाई अझ अप्ठेरो त्यो बेला हुनेछ जतिबेला यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश गर्नेछ । सुरक्षा परिषद्मा रूसी कदमको पक्षरविपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए कस्को पक्ष लिने भन्ने निर्णय लिन थप सकस हुनेछ ।
‘प्रेसर त आउला । रूसले पनि देला । पश्चिमी राष्ट्रले पनि देलान् । अहिले भारत रूसबाट धेरै टाढिन सकेको छैन । यसको कारण चीन हुनसक्छ । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि भारतले रूसबाट सैन्य सामग्री खरिद गरिरहेको छ । प्रेसर आए पनि हामीले अडान लिनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्छ । हस्तक्षेप र हिंसा स्वीकार्य छैन भन्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो।
देश सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि सबैको समान रूपमा सम्मान हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । आफू ठूलो र शक्तिशाली छु भन्दैमा सानो र कमजोर राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्न नहुने बुझाइ भट्टराईको छ ।
‘हामीले मुद्दाको गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । सबै देशलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ । आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्ने अधिकार छ । सार्वभौमिकता भनेको सानो र ठूलो हुँदैन । हामी सबैले सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘२०१४ मा भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको अवस्था थियो । हामीले युक्रेनको पक्ष लिने कुरा थियो तर आवश्यक छलफल गर्न नभ्याएपछि तटस्थ बस्ने निर्णय भएको थियो,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भन्नुभयो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूवाती सात महिनामा युक्रेनबाट पाँच लाख २८ हजार रुपैयाँको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा युक्रेनबाट दुई करोड लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको थियो ।
‘सैनिक हेलिकोप्टर मर्मत–सम्भार, हार्डवेयरमा असर गर्छ । हाम्रो सेनाको हवाई गतिविधिमा असर गर्छ । प्रकोपका घटना भएका बेला यो असर अझ बढी देखिन सक्छ,’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भन्नुभयो ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यसको असर नेपालको व्यापारमा पर्नेछ । युक्रेनबाट नेपाल आउने कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल रोकिने छ, जसको असर नेपाली उद्योगमा पर्नेछ । यसले रोजगारीमा त समस्या ल्याउने छ नै साथसाथै खाने तेलको मूल्यवृद्धि पनि गराउनेछ । अर्थात् रूस–युक्रेन युद्धले नेपालीको भान्छामा समेत असर गर्नेछ । - सुरेन्द्र पौडेल